Makundano eZimbabwe Open Golf Odzoka
Makundano makuru emutambo eZimbabwe Open Golf adzoka kwapera makore matatu asina kuitwa vatambi vachitanga kunyoresa kukwikwidza nhasi.
Makundano aya arikudzoka aine mari inoita iyo mamirioni gumi nemaviri nezviuru mazana mashanu zvemadhora emuZimbabwe apo achaitwa muna Chivabvu.
Asi achakunda kana asiri wemuZimbabwe achatambidzwa mubairo wake nemari yekunze kwenyika.
Vachitaura nhasi mangwanani paparurwa makwikwi egore rino aya, vari kuisa mari mumakwikwi ayaVaWebster Rusere vebhanga reFBC Holdings vanoti vatambi vacharwira mari yemuZimbabwe iyo vapa varikuronga zvemakundano aya.
Zimbabwe Open yakapedzisira kuitwa muna 2018 ndokumiswa nemhaka yekuoma kwehupfumi munyika pamwe nekutya kupararira kwechirwere cheCovid 19.
Vari kuronga makwikwi aya VaMichael Mahachi vanoti vari kutarisira vatambi zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri munhandare mbiri dzeChapman neRoyal Harare.
VaMahachi vanoti vamwe vevatambi ava vachabva kuEurope nekuAmerica sezvo Zimbabwe Open iri muhurukuro dzekupinda muEuropean Tour gore rinouya.
Zimbabwe Open inhengo yeSunshine Tour iyo ine muzinda muSouth Africa. Mukuru weSunshine Tour VaGary Todd vanga varipowo paparurwa makundano aya.
Zimbabwe Open iri kutanga musi wa 16 Chivabvu ichipera musi wa 22 Chivabvu sekutaura kwaVaMahachi.
Vatambi vatatu chete vemuZimbabwe Anderson Rusike, Marc McNulty na Nick Price ndivo vakatora mukombe uyu kubvira muna 1986 apo makwikwi aya akavambwa.
Tombotarisa nhau dzemitambo, mumashoko kuvatori venhau, CAFyadzokorora zvakataurwa neFIFA zvekuti Zimbabwe neKenya idzo dzakambomiswa kutamba nedzimwe nyika neFIFA dzichatenderwa chete kuti dzikwikwidze kana dzagadzirisa zvikonzero zvakaita kuti dzimbomiswa zvine chekuita nekupindira kwemapazi ehurumende munyaya dzenhabvu.
Draw yeAfrica nations Cup 2023 iri kuitwa musi wa23 Kubvumbi kuSouth Africa uye Sports and Recreation Commission ikatadza kuti mutungamiri weZIFA VaFelton Kamambo vayakamisa basa vadzoke zvinoreva kuti haisi kuzopinda mumakwikwi aya.
Tichiri panhau dzemitambo Castle Premier Soccer League yazivisawo kuti yambomisa mitambo mukupera kwesvondo nekuda kwezororo reEaster. Mitambo ichatanga musi wa 23 Kubvumbi.